खोई तिमीहरुको जनादेश ? - Mero Sabda
ऐतिहासिक निर्णय कसैका लागि, कसैका लागि अन्यायपूर्ण र क्षेत्राधिकार बाहिर गएर गरिएको कलसित निर्णय । अनि कसैका लागि अदालतमा गोरु व्याएको जस्तो निर्णय । असार अठ्ठाइस गतेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लिएको पैmसलाको सन्दर्भ । उक्त दिन सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाका बारेमा राजनीतिक दल, ती दल विशेषका बुद्धिजीविहरुबाट गरिएको विश्लेषण ।
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो दिग्विजय हाँक्ने अठोतका साथ दुई वटा राजनीतिक शक्तिले दुई वटा पाइलट मिलेर जम्बोजेट उडाएर नेपाललाई आकाशजंगाको सयर गराउने सपनाको भ्रम नेपाली जनताको आँखामा छ्यापेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको समस्तगत एकिकरण । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रुपमा संघीय र प्रादेशिक संसदमा उपस्थिति जनिएको । भीमकाय जम्बो जेट, दुई वटा पाइलत अर्थात् दुई वटा अध्यक्ष । नेपाल र नेपाली कम्युनिष्टहरुका लागि नयाँ प्रयास र बिल्कुलै नयाँ प्रयोग । जम्बोजेटका एउटा पाइलट प्रधानमन्त्रीका रुपमा सरकार सञ्चालन गर्ने र अर्को पाइलट गौरवशाली पार्टीको स्टेरिङ समाउने ।
अर्थात् प्रधानमन्त्रीका रुपमा एउटा पाइलटले चलाएको जहाज प्रशान्त महासागरको बीचमा खसेको अवस्था । खड्गप्रसाद ओली पूर्ण पाइलट र पुष्पकमल दहाल को–पाइलट । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल आदिहरु चालक दलका महत्वपूर्ण सदस्यहरु । नयाँ जोगीको बाक्लो खरानी भन्ने हाम्रो उखान चरितार्थ भए झैं शुरुशुरुका महिनाहरुमा सरकारका मन्त्रीहरुका पनि उत्ताउलो तरिका अर्थात् हौसिएर समृद्ध नेपालको जहाजको गतिलाई बेगवान बनाउने भान प्रतित गराए । कसैले भ्रष्टाचारको सीमान्तकृत रेखालाई नै उछिनेर अग्रगामी छलाङ मार्न पनि पछि परेनन् । एउटा शक्तिले बेलगाम घोडा जस्तो राज्यसत्तालाई चरम प्रभावमा पारेर अरु सबै विचार समूह र दलहरुलाई पेलेर जाने क्रम झन्झन् तीब्र गतिमा अगाडि बढ्दै गयो । सामान्यता यो मानवीय स्वभाव नै पनि एकपछि अर्को गर्दै भ्रम मै भए पनि सफलता हासिल गर्नुपर्छ भन्ने भान परेको हुनुपर्छ । यो यथार्थबाट सत्ता स्वादपान गरिरहेकाहरु पनि अछुतो रहन सक्दैनन् ।
ड्राइभर नम्बर– दुई
अर्थात् दोस्रा पाइलट । दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ । शक्ति विहिनताको अवस्था ।
माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेवहरु हेपिएको अवस्था ।
गम्भीर झडप । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा संसद अपदस्त । आफ्नाहरुबाट भएको निरन्तरताको असहयोगका कारण भनिएको । आफ्नाहरु भनिने आफूहरु मिचाइमा परेको । मुद्दा अदालतमा । लामो बहस, छलफल र निष्कर्ष– संसद स्थापना ।
फेरि ड्राइभर नम्बर– एक
काम चलाउनका लागि राष्ट्रपतिद्वारा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री सहित बहुमतसिद्ध गर्न एक महिनाको समय किटानी । बहुमत सिद्ध गर्न सक्दिनँ भनी उत्तानो टाङ लगाएको अवस्था । सारा नेपाल मस्त भएको बेला रातको बाह्र बजेत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको गोप्य बैठकद्वारा पुनः मध्यावधि घोषणा । फेरि अर्को दुर्घटना संसद विगठन ।
तीन बर्षदेखि विभिन्न परिघटनाहरु सृजित गराएर सञ्चित गरेको शक्तिको प्रदर्शन । यतिखेर नेपाली कांग्रेस र अरुहरु निर्वाचनमा जानुपर्ने । संसदीय प्रणालीको कुशल अभ्यास पनि यही हो । ताजा जनादेश । तर त्यसो भनिरहँदा फेरि राजनीतिमा अर्थात् सत्ताको स्वादमा उन्माद रहेको हुँडार प्रवृत्तिलाई उन्मुक्त छाडिरहँदा देश र जनताले कति पटक भक्ष हुनुपर्ने हो, ऐतिहासिक डर । अनि फेरि यो परम्पराको पूर्ण विराम कहिले ? एउटा प्रश्न ।
जसका लागि उपायको खोजीहरु । फेरि अदालत । अदालतदेखि संसद हुँदै फेरि अदालतसम्म पुगेको नेपालको राजनीति । नेताहरुबाट चल्न नसकेर बारम्बार न्यायालय पुगेको नेपालको पछिल्ला राजनीतिक गतिविधि ।
बहस, छलफल र निर्णय । उही संसदको पुनःस्थापना । फरक प्रधानमन्त्रीसम्म तोकेको अवस्था । राजनीतिले न्यायालयको शरणमा आफूलाई लम्पसार पारेको अवस्थामा संसदको काम पनि गरिदिनु पर्ने । प्रधानमन्त्री समेत तोकिदिनुपर्ने । अनि किन फेसबुके विश्लेषकहरु भन्छन् परमादेश कि जनादेश ।